Namuhla, lo muthi, mhlawumbe, uyaziwa kuwo wonke umuntu futhi uyathandwa. Ngingathanda ukuba ngingalokothi ngigule, kodwa ngesikhathi esisodwa sezifo ezithathelwanayo ezibandayo kuma-pharmacy ezindawo zokuhlala ezincane kwakukhona imigqa futhi lesi sidakamizwa sasihlehlisiwe. Kuphathelene neParacetamol. Ekhuluma ngokuthandwa nokusabalalisa kwalesi sidakamizwa, kufanele kuqondwe ukuthi asizange sisho i-CIS yangaphambili, kodwa emazweni omhlaba jikelele.
Umuthi uphephile ngempela, unomphumela omuhle. Ithengiswa ngokukhululekile, ngaphandle kwemithi kadokotela. Nakhu okushiwo isichazamazwi: I-Paracetamol iyi-analgesic futhi i-antipyretic ine-analgesic, antipyretic effect. Unomthelela wokunciphisa okulinganiselwe emzimbeni.
Ngabe iziphi izimo ezibekwayo ukulungiselela "iParacetamol"? Izinkomba zokusetshenziswa yizinto ezilandelayo: ukwelashwa ubuhlungu bezinhlobo ezihlukahlukene. Kufana nezinhlungu noma izinyosi, ubuhlungu be-back, neuralgia, ubuhlungu bezinsizwa kanye no-joint. Isetshenziselwa ekwelapheni izinqubo ezithathelwanayo nokuvuvukala, kanye nokufaka esikhundleni se-acetylsalicylic acid kanye neziqephu zayo zokubekezelelana okungekho emthethweni kwalokhu okulandelayo.
Ngokuqondene nokubunjwa kweParacetamol, imiyalelo yokusetshenziswa iqukethe ulwazi olulandelayo: umuthi utholakala amaphilisi nama-capsules, amakhandlela, ama-syrups namaconsi, amaphilisi e-effervescent ne-chewable, kanye nama-elixirs nezixazululo.
Iqiniso liwukuthi umuthi wokwelapha ocatshangelwa ngaphansi kwamagama ahlukene ukhishwa ngamashumi namakhulu ezinkampanini ezihlukene zokwelapha. Futhi uyazi ukuthi uma uthengisa, isibonelo, "i-Opradol" noma "i-Tylenol" efanayo, empeleni uthole i- "Paracetamol". Imiyalo yokusetshenziswa isitshele ngamanye amagama omuthi, izimboni ezibizwa kanjalo.
Ngesizathu esithile, abanye abathengi bakholelwa ukuthi u-Effaralgan ungumuthi omuhle, futhi i-Paracetamol ayiphilisi. Kodwa lena imishanguzo efanayo, futhi intengo esiyicabangayo iyayithanda kakhulu. "Panadol" no "Dofalgan", "Acitaminophen" no "Darval", "Volpan", "Kalpol", "Mexalen" kanye neminye imithi iqukethe i-paracetamol efanayo, abakhiqizi basekhaya ababizile.
Mayelana nomthamo. Izidakamizwa "I-Paracetamol" imiyalelo yokusetshenziswa uncoma ukuthatha ngale ndlela: iziguli ezindala iziguli zithathwa izikhathi ezine (3.4) ngosuku. Ukudla kwesikhathi esisodwa kungamaphilisi angu-1 - 2. Isilinganiso esisodwa esiphezulu esisodwa kuleli cala kubhekwa njengegremu eyodwa nengxenye yomuthi. Ngokuqondene nomthamo wansuku zonke, akufanele udlule amagremu amane we-paracetamol.
Izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-12 zingathatha amagremu amabili omuthi ngosuku, ngokusekelwe ezindleleni ezine. Kusukela eminyakeni emithathu kuya kweyisithupha, isilinganiso esiphezulu se "Paracetamol" yezingane sibalwa ngalendlela elandelayo: 60 mg wezidakamizwa nge kilogram yesisindo futhi ihlukaniswe yaba yizilinganiso ezintathu kuya kwezine.
Imiphumela emibi yesidakamizwa "Imfundo ye-Paracetamol" yokusetshenziswa ichaza ngale ndlela:
Ukubonakaliswa kwe-allergen, ukuzamazama;
Izinga elinciphile le-hemoglobin;
Ngokusetshenziswa kwesikhathi eside kwakukhona izifo eziphakeme ze-hepatic;
Ukulala, ukukhuphuka okukhulu;
Ngokuqondene nokudlula ngokweqile kwe-"Paracetamol", amavaysi enobuthi angaholela ekutheni i-pathologies enesibindi, ukuthuthukiswa kwe-necrosis. Kulesi simo, ingozi iyanda ngokusetshenziswa okuhlanganyelwe kwesidakamizwa notshwala. Ngaphandle, ubukhulu besikhumba bungabonwa , buhambisana nosizi, ukuhlanza.
Ukuqhathaniswa kokubili kokubili kuyisimangalo kanye nokuntuleka kwe-hepatic. Ku-suppositories, lesi sidakamizwa akufanele sisetshenziselwe ukuvuvukala kwe-rectum, i-mucosa yayo. Ukukhulelwa kuqokwa ngokuqapha.
Lapho kukhona izimpawu zokudlula ngokweqile, okokuqala, kubalulekile ukugeza isisu futhi unakekele ukunakekelwa kwezokwelapha izisulu ezinjalo.